ह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
ह्वात्तै बढ्यो विदेशी मुद्राको भाउ : कुन देशको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं १२ फागुन ।
आज आताको दोस्रो दिन नेपाली बजारमा युरोपियन यूरो, यूके पाउण्ड, मलेसियन रिँगिट र बहराइन दिनारको भाउ उकालो लागेको छ ।
त्यस्तै आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १४ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय १४ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ। भने आज युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १४ पैसा छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ।
त्यस्तै आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३० पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ। आज त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ४८ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ पैयाँ ९ पैसा रहेको छ।
भने आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय ३ रुपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ५ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ।
भने आज त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ।त्यस्तैगरी आज कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७३ रुपैयाँ ६ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७५ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। भने आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय २४ रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २४ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ।